ရုပ်ရှင်အညွှန်း : Joker (2019) (Non Spoiler) - CantWait2Say
ဒီဇာတ်ကားအကြောင်းကတော့ အခုတလော Facebook ပေါ်မှာရော သတင်းဝဘ်ဆိုက်တွေပေါ်မှာရော နေရာအနှံ့ယူထားတာကို အားလုံးပဲတွေ့နေရမယ်ထင်ပါတယ်။ အဲ့ဒီလိုတွေ့ရဖို့ရော တကယ်ထိုက်တန်တဲ့ ရုပ်ရှင်တစ်ခုဖြစ်ရဲ့လား ဆိုတာကိုတော့ ကျနော်တို့ နည်းနည်း ဆွေးနွေးကြည့်ကြဖို့လိုမယ်ထင်ပါတယ်။ တကယ်တော့ ကျနော် ဒီရုပ်ရှင်ကို Review တွေတော်တော်များများကို လည်းအားလုံးနီးပါးဖတ်ပြီးသားဖြစ်မှာပါ ။ R Rated ကားတစ်ကားဖြစ်ပြီး MIDB မှာ Rating အကြမ်းကြီးရထားတဲ့ ရုပ်ရှင်တစ်ကားကို Review လုပ်ရတာက တော်တော်တာဝန်ကြီးပါတယ်။ ဒါပေမယ့် Review ကိုတော့ Review ဆန်ဆန်ရေးကြည့်ရမှာပါပဲ။ တစ်ခုကြိုတင်ဝန်ခံချင်တာကတော့ Review ရေးတဲ့သူဟာ DC ပရိသတ်တစ်ယောက် ဖြစ်နေတာကြောင့် တချို့နရာတွေမှာ လိုတာထက်ပိုပြီး အမွှမ်းတင်တာမျိုးပါသွားခဲ့ရင်တော့ သည်းခံခွင့်လွှတ်ပေးကြဖို့ ကြိုပြီးတော့ တောင်းဆိုထားပါတယ်။
ဒီဇာတ်ကားကို ကြည့်မယ်ဆိုတော့ ကျနော်တို့စိတ်ထားမှာ အဓိကသရုပ်ဆောင် Joaqin Phoenix ရဲ့သရုပ်ဆောင် ပညာပိုင်းကို စိုးရိမ်စရာမရှိပေမယ့် ရှေ့မှာရှိခဲ့တဲ့ The Dark Knight ထဲက Joker နဲ့နိုင်းယှဉ်လိုစိတ်တွေရှိနေခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ရုံထဲကိုရောက်သွားပြီးတဲ့အချိန် ဇာတ်ကား စလိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ အဲ့ဒီစိတ်တွေအကုန်လုံးဟာ ပျောက်ကုန်ပါတယ်။ ဇာတ်ကားကြည့်နေတုန်းမှာလည်း Joker နေရာကသရုပ်ဆောင်ဖို့ နာမည်တွေထွက်ခဲ့တဲ့ Leonardo DiCaprio ဆိုရင် ဆိုတဲ့အတွေးနဲ့ နည်းနည်းတော့ ပြုံးရုံလေး ပြုံးမိခဲ့ပါတယ်။ ကျနော်တို့ဇာတ်လမ်းအကြောင်းလေးနည်းနည်းပြောကြည့်ကြရအောင် ။
1981 ခုနှစ်က Gotham မြို့ရဲ့ အခြေခံလူတန်းစားတွေနေထိုင်တဲ့ ရပ်ကွက်ထဲမှာ Arthur Fleck ဆိုတဲ့ အမျိုးသားတစ်ယောက်က လူရွှင်တော်လုပ်ပြီး ဖျော်ဖြေရေးလုပ်ရတဲ့အလုပ်တစ်ခုကိုလုပ်ကိုင်ပြီး အသက်ကြီးရင့်နေပြီဖြစ်တဲ့ အမေနဲ့နေထိုင်ကြပါတယ်။့် လူတွေရဲ့ နှိမ့်ချဆက်ဆံခြင်းကို ခံရတဲ့ Arthur တစ်ယောက် အလုပ်လုပ်နေရင်း တစ်ရက်မှာ မမျှော်လင့်ထားတဲ့ အဖြစ်ပျက်တစ်ခုကြောင့် အလုပ်ကို ဆုံးရှုးံခဲ့ရ တာကနေစပြီး ဇာတ်လမ်းတစ်ခုလုံးကို အရှိန်ပြင်းပြင်းနဲ့ မြှင့်သွားပါတယ်။ ဒီဇာတ်ကားဟာ Gotham မြို့သားတစ်ယောက်ရဲ့ အကြောင်းကိုရိုက်ထားတဲ့အဖြစ်တဲ့အတွက် Wyane မိသားစုအကြောင်းတွေ Arkham စိတ္တဇဆေးရုံပါတာတွေကတော့ အထူးတလည်လုပ်ပြီး ပြောပြနေစရာလိုမယ်မထင်ပါဘူး ။လာမယ့် Batman ကားအတွက် အစဖြစ်လာစရာ Ester egg တွေလည်း ပါဝင်နေတာကို တွေ့မြင်ရမှာဖြစ်တဲ့ဇာတ်လမ်းအကြောင်းပြောပြတာကို ဒီလောက်နဲ့ပဲ ရပ်ထားလိုက်ပါတော့မယ်။
ဒီရုပ်ရှင်ကို ဒါရိုက်တာ အဖြစ်တာဝန်ယူရိုကူးခဲ့တဲ့သူကတော့ Hangover Trilogy ကိုရိုက်ကူးခဲ့တဲ့ Todd Phillips ပါ ။ ဇာတ်ညွှန်းပိုင်းကိုလည်းTodd Phillipsက ပါဝင်အားဖြည့်ထားပြီး 8 Mile ဇာတ်လမ်းကို ရေးသားခဲ့သူတစ်ဦးဖြစ်တဲ့ Scott Silver ကအဓိကရေးသားခဲ့ပါတယ်။ ဒီဇာတ်ကားထုတ်လုပ်မှုအပိုင်းထဲမှာတော့ နာမည်ကျော် သရုပ်ဆောင်တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ Bradley Cooper နဲ့ အဖွဲ့ တာဝန်ယူခဲ့တာပါ။ ဖြန့်ချိရေးကတော့ Warner Bros Picture ပါ ။ သြဂတ် ၃၁ ရက်နေ့စတင်ကျင်းပခဲ့တဲ့ ၇၆ ကြိမ်မြောက် Venice ပွဲမှာ စတင်ပြသခဲ့ပြီး Golden Lion ဆုကိုလည်း ရယူဆွတ်ခူးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ လောလောဆယ်အထိတော့ Best Soundtrack တစ်ဆု အပါအဝင် ဆု ၃ဆုကိုတော့ ပိုင်ဆိုင်ထားပြီး စစ်စာမျက်နှာ အဖွင့်လှခဲ့ရုံမကဘဲ အခုချိန်မှာ စံချိန်တစ်ခုပြီးတစ်ခု ရိုက်ချိုးနေတဲ့ ရုပ်ရှင်တစ်ခုဖြစ်နေပါပြီ။
အကယ်၍သာ ဒီဇာတ်ကားရဲ့ အဓိကသရုပ်ဆောင်နေရာမှာ Joaquin Phoenix မဟုတ်ခဲ့ဘူးဆိုရင်တော့ ကျနော်တို့ ကြည့်ခဲ့ရတဲ့ Joker(2019) ဟာဒီလောက်ကောင်းမှမဟုတ်ပါဘူး ။ Leonardo Decaprio ကြီးဖြစ်နေရင်တောင်ကောင်းမှာမဟုတ်ပါဘူး ။ Arthur Fleck အဖြစ်သရုပ်ဆောင်ချက်တွေ ဝမ်းနည်းရာကနေ ထွက်လာတဲ့ ရယ်သံတွေ ထိန်းချုပ်မှုတွေ မျက်နှာကနေဖော်ပြရတဲ့ ခံစားသက်ဝင်မှုတွေဟာ တကယ့်ကို ကောင်းကောင်းခံစားခဲ့ရတဲ့အပြင် အသံပိုင်းမှာလည်း ဟိုးအဝေးကနေအနီးကို ရောက်လာခဲ့တဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်အသံတွေ နောက်ပြီး စီးကရက် ရှိုက်ဖွာသံတွေဟာ ဒီဇတ်ကားကို အကောင်းဆုံးထောက်ပံ့ပေးနိုင်ခဲ့တဲ့တာပါ ။ Gotham မြို့ကြီးဟာ ကျနော်တို့မြင်နေကျပုံစံလိုမျိုး မိုးတွေအမြဲတမ်းအုံ့ဆိုင်းမနေပါဘူး နောက်ပြီး Camera Work ပိုင်းမှာ Close Up ရိုက်တဲ့အပိုင်းတွေဟာ ကျနော့်စိတ်ကို အဆွဲခေါ်နိုင်ဆုံး အပိုင်းတွေပါပဲ။
ဒီဇာတ်ကားကို ရုံထဲမှာ သွားမကြည့်ဘဲ အိမ်မှာပဲ ကြည့်မယ် ဒါမှမဟုတ် Download Link တွေကနေတဆင့်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ Audio Device ကောင်းကောင်းနဲ့ကြည့်စေချင်ပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင် ဒီဇာတ်ကားမှာသုံးထားတဲ့ အသံပိုင်းဆိုင်ရာ အရသာတွေကို အပြည့်အဝ ခံစားစေရဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ ဖြစ်နိုင်ရင်တော့ ဒီဇာတ်ကားကို ရုပ်ရှင်ရုံထဲမှာ သွားကြည့်သင့်ပါတယ်။ တကယ်လို့ ဒီဇာတ်ကားကို ကိုယ်ပိုင် Rating တစ်ခုအဖြစ် သတ်မှတ်ပေးရမယ်ဆိုရင်တော့ 9.9/10 ပေးချင်ပါတယ်။ ဘာကြောင့်1လျော့ပေးထားရလည်းဆိုရင်တော့ ကျနော်မကြိုက်လိုက်တဲ့ အခန်းတစ်ခန်းပါနေလို့ပါပဲ။ အဲ့ဒီတစ်ခန်းကိုပြောပြလိုက်ရင်လည်း Spoiler ဖြစ်သွားမှာစိုးလို့မပြောတော့ပါဘူး။ နောက်ထပ်တစ်ချက်ကတော့ မြန်မာ နိုင်ငံက ဆင်ဆာဖြတ်တယ်ဆိုတဲ့အရာတွေကြောင့် ရုပ်ရှင်ကို ရုပ်ရှင်လိုသိပ်မကြည့်ခဲ့သလိုခံစားရလို့ပါ ။နောက်ပြီး R Rated ကားတစ်ကားဖြစ်တာကြောင့် အရွယ်မရောက်သေးတဲ့သူတွေကိုတော့ မပြကြပါနဲ့ ။အားလုံးပဲ Put onaHappy Face ! ပါဗျာ ။
ရုပျရှငျအညှနျး : Joker (2019) (Non Spoiler)
ဒီဇာတျကားအကွောငျးကတော့ အခုတလော Facebook ပျေါမှာရော သတငျးဝဘျဆိုကျတှပေျေါမှာရော နရောအနှံ့ယူထားတာကို အားလုံးပဲတှနေ့ရေမယျထငျပါတယျ။ အဲ့ဒီလိုတှရေ့ဖို့ရော တကယျထိုကျတနျတဲ့ ရုပျရှငျတဈခုဖွဈရဲ့လား ဆိုတာကိုတော့ ကနြျောတို့ နညျးနညျး ဆှေးနှေးကွညျ့ကွဖို့လိုမယျထငျပါတယျ။ တကယျတော့ ကနြျော ဒီရုပျရှငျကို Review တှတေျောတျောမြားမြားကို လညျးအားလုံးနီးပါးဖတျပွီးသားဖွဈမှာပါ ။ R Rated ကားတဈကားဖွဈပွီး MIDB မှာ Rating အကွမျးကွီးရထားတဲ့ ရုပျရှငျတဈကားကို Review လုပျရတာက တျောတျောတာဝနျကွီးပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ Review ကိုတော့ Review ဆနျဆနျရေးကွညျ့ရမှာပါပဲ။ တဈခုကွိုတငျဝနျခံခငျြတာကတော့ Review ရေးတဲ့သူဟာ DC ပရိသတျတဈယောကျ ဖွဈနတောကွောငျ့ တခြို့နရာတှမှော လိုတာထကျပိုပွီး အမှမျးတငျတာမြိုးပါသှားခဲ့ရငျတော့ သညျးခံခှငျ့လှတျပေးကွဖို့ ကွိုပွီးတော့ တောငျးဆိုထားပါတယျ။
ဒီဇာတျကားကို ကွညျ့မယျဆိုတော့ ကနြျောတို့စိတျထားမှာ အဓိကသရုပျဆောငျ Joaqin Phoenix ရဲ့သရုပျဆောငျ ပညာပိုငျးကို စိုးရိမျစရာမရှိပမေယျ့ ရှမှေ့ာရှိခဲ့တဲ့ The Dark Knight ထဲက Joker နဲ့နိုငျးယှဉျလိုစိတျတှရှေိနခေဲ့ပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ ရုံထဲကိုရောကျသှားပွီးတဲ့အခြိနျ ဇာတျကား စလိုကျပွီဆိုတာနဲ့ အဲ့ဒီစိတျတှအေကုနျလုံးဟာ ပြောကျကုနျပါတယျ။ ဇာတျကားကွညျ့နတေုနျးမှာလညျး Joker နရောကသရုပျဆောငျဖို့ နာမညျတှထှေကျခဲ့တဲ့ Leonardo DiCaprio ဆိုရငျ ဆိုတဲ့အတှေးနဲ့ နညျးနညျးတော့ ပွုံးရုံလေး ပွုံးမိခဲ့ပါတယျ။ ကနြျောတို့ဇာတျလမျးအကွောငျးလေးနညျးနညျးပွောကွညျ့ကွရအောငျ ။
1981 ခုနှဈက Gotham မွို့ရဲ့ အခွခေံလူတနျးစားတှနေထေိုငျတဲ့ ရပျကှကျထဲမှာ Arthur Fleck ဆိုတဲ့ အမြိုးသားတဈယောကျက လူရှငျတျောလုပျပွီး ဖြျောဖွရေေးလုပျရတဲ့အလုပျတဈခုကိုလုပျကိုငျပွီး အသကျကွီးရငျ့နပွေီဖွဈတဲ့ အမနေဲ့နထေိုငျကွပါတယျ။ျ့ လူတှရေဲ့ နှိမျ့ခဆြကျဆံခွငျးကို ခံရတဲ့ Arthur တဈယောကျ အလုပျလုပျနရေငျး တဈရကျမှာ မမြှျောလငျ့ထားတဲ့ အဖွဈပကျြတဈခုကွောငျ့ အလုပျကို ဆုံးရှုးံခဲ့ရ တာကနစေပွီး ဇာတျလမျးတဈခုလုံးကို အရှိနျပွငျးပွငျးနဲ့ မွှငျ့သှားပါတယျ။ ဒီဇာတျကားဟာ Gotham မွို့သားတဈယောကျရဲ့ အကွောငျးကိုရိုကျထားတဲ့အဖွဈတဲ့အတှကျ Wyane မိသားစုအကွောငျးတှေ Arkham စိတ်တဇဆေးရုံပါတာတှကေတော့ အထူးတလညျလုပျပွီး ပွောပွနစေရာလိုမယျမထငျပါဘူး ။လာမယျ့ Batman ကားအတှကျ အစဖွဈလာစရာ Ester egg တှလေညျး ပါဝငျနတောကို တှမွေ့ငျရမှာဖွဈတဲ့ဇာတျလမျးအကွောငျးပွောပွတာကို ဒီလောကျနဲ့ပဲ ရပျထားလိုကျပါတော့မယျ။
ဒီရုပျရှငျကို ဒါရိုကျတာ အဖွဈတာဝနျယူရိုကူးခဲ့တဲ့သူကတော့ Hangover Trilogy ကိုရိုကျကူးခဲ့တဲ့ Todd Phillips ပါ ။ ဇာတျညှနျးပိုငျးကိုလညျးTodd Phillipsက ပါဝငျအားဖွညျ့ထားပွီး 8 Mile ဇာတျလမျးကို ရေးသားခဲ့သူတဈဦးဖွဈတဲ့ Scott Silver ကအဓိကရေးသားခဲ့ပါတယျ။ ဒီဇာတျကားထုတျလုပျမှုအပိုငျးထဲမှာတော့ နာမညျကြျော သရုပျဆောငျတဈယောကျဖွဈတဲ့ Bradley Cooper နဲ့ အဖှဲ့ တာဝနျယူခဲ့တာပါ။ ဖွနျ့ခြိရေးကတော့ Warner Bros Picture ပါ ။ သွဂတျ ၃၁ ရကျနစေ့တငျကငျြးပခဲ့တဲ့ ၇၆ ကွိမျမွောကျ Venice ပှဲမှာ စတငျပွသခဲ့ပွီး Golden Lion ဆုကိုလညျး ရယူဆှတျခူးနိုငျခဲ့ပါတယျ။ လောလောဆယျအထိတော့ Best Soundtrack တဈဆု အပါအဝငျ ဆု ၃ဆုကိုတော့ ပိုငျဆိုငျထားပွီး စဈစာမကျြနှာ အဖှငျ့လှခဲ့ရုံမကဘဲ အခုခြိနျမှာ စံခြိနျတဈခုပွီးတဈခု ရိုကျခြိုးနတေဲ့ ရုပျရှငျတဈခုဖွဈနပေါပွီ။
အကယျ၍သာ ဒီဇာတျကားရဲ့ အဓိကသရုပျဆောငျနရောမှာ Joaquin Phoenix မဟုတျခဲ့ဘူးဆိုရငျတော့ ကနြျောတို့ ကွညျ့ခဲ့ရတဲ့ Joker(2019) ဟာဒီလောကျကောငျးမှမဟုတျပါဘူး ။ Leonardo Decaprio ကွီးဖွဈနရေငျတောငျကောငျးမှာမဟုတျပါဘူး ။ Arthur Fleck အဖွဈသရုပျဆောငျခကျြတှေ ဝမျးနညျးရာကနေ ထှကျလာတဲ့ ရယျသံတှေ ထိနျးခြုပျမှုတှေ မကျြနှာကနဖေျောပွရတဲ့ ခံစားသကျဝငျမှုတှဟော တကယျ့ကို ကောငျးကောငျးခံစားခဲ့ရတဲ့အပွငျ အသံပိုငျးမှာလညျး ဟိုးအဝေးကနအေနီးကို ရောကျလာခဲ့တဲ့ ပတျဝနျးကငျြအသံတှေ နောကျပွီး စီးကရကျ ရှိုကျဖှာသံတှဟော ဒီဇတျကားကို အကောငျးဆုံးထောကျပံ့ပေးနိုငျခဲ့တဲ့တာပါ ။ Gotham မွို့ကွီးဟာ ကနြျောတို့မွငျနကေပြုံစံလိုမြိုး မိုးတှအေမွဲတမျးအုံ့ဆိုငျးမနပေါဘူး နောကျပွီး Camera Work ပိုငျးမှာ Close Up ရိုကျတဲ့အပိုငျးတှဟော ကနြေျာ့စိတျကို အဆှဲချေါနိုငျဆုံး အပိုငျးတှပေါပဲ။
ဒီဇာတျကားကို ရုံထဲမှာ သှားမကွညျ့ဘဲ အိမျမှာပဲ ကွညျ့မယျ ဒါမှမဟုတျ Download Link တှကေနတေဆငျ့ကွညျ့မယျဆိုရငျတော့ Audio Device ကောငျးကောငျးနဲ့ကွညျ့စခေငျြပါတယျ။ ဘာဖွဈလို့လဲဆိုရငျ ဒီဇာတျကားမှာသုံးထားတဲ့ အသံပိုငျးဆိုငျရာ အရသာတှကေို အပွညျ့အဝ ခံစားစရေဖို့ဖွဈပါတယျ။ ဖွဈနိုငျရငျတော့ ဒီဇာတျကားကို ရုပျရှငျရုံထဲမှာ သှားကွညျ့သငျ့ပါတယျ။ တကယျလို့ ဒီဇာတျကားကို ကိုယျပိုငျ Rating တဈခုအဖွဈ သတျမှတျပေးရမယျဆိုရငျတော့ 9.9/10 ပေးခငျြပါတယျ။ ဘာကွောငျ့1လြော့ပေးထားရလညျးဆိုရငျတော့ ကနြျောမကွိုကျလိုကျတဲ့ အခနျးတဈခနျးပါနလေို့ပါပဲ။ အဲ့ဒီတဈခနျးကိုပွောပွလိုကျရငျလညျး Spoiler ဖွဈသှားမှာစိုးလို့မပွောတော့ပါဘူး။ နောကျထပျတဈခကျြကတော့ မွနျမာ နိုငျငံက ဆငျဆာဖွတျတယျဆိုတဲ့အရာတှကွေောငျ့ ရုပျရှငျကို ရုပျရှငျလိုသိပျမကွညျ့ခဲ့သလိုခံစားရလို့ပါ ။နောကျပွီး R Rated ကားတဈကားဖွဈတာကွောငျ့ အရှယျမရောကျသေးတဲ့သူတှကေိုတော့ မပွကွပါနဲ့ ။အားလုံးပဲ Put onaHappy Face ! ပါဗြာ ။